कांग्रेस महामन्त्री कोइराला अस्पताल भर्ना - Bichar news - Nepali Online News Portal
करोना अपडेट, मुख्य खबर, राजनीति, समाचार, स्वास्थ्य
काठमाडौं। कोरोना संक्रमित नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। केहिदिन अघि कोरोना संक्रमण देखिएपछि होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका डा. कोइरालालाई मंगलबार साँझ ज्वरो बढेपछि चाबहिलस्थित ॐ अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो।
नेता शशांकको उपचारमा ॐ अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरसमेत रहेका सिनियर कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डा. विश्वनाथ कोइराला नेतृत्वको टोली खटिएको छ। टोलीमा सिनियर कन्सल्ट्यान्ट पल्मोनोलोजिष्ट डा. सुबोध सागर ढकाल, कन्सल्ट्यान्ट इन्टेन्सिभिष्ट डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ लगायत छन्।
डा. शशांकको अवस्था स्थिर र सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ। पाँच वर्षअघि एस्पिरेशन न्युमोनियाका कारण अचानक अचेत हुँदा पनि डा। कोइरालाको उपचार ॐ हस्पिटलको सघन उपचार कक्षमा गरिएको थियो।
- ३१ भाद्र २०७७, बुधबार ११:०४ मा प्रकाशित